Computer Technical Notes & Sharing Softwares: November 2008
Bit ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ၏အသေးဆုံးပမာဏ (သို့ မဟုတ်) electronic information storage ၏ အသေးဆုံးသောပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၄င်းကတော့ information တွေကို စက်နားလည်အောင် 0(false)(သုိ့ မဟုတ်)1(true) ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။(မီးခလုတ်ချိန်းသကဲ့သို့ လုပ်ပေးပါတယ်)
Byte ဆိုတာတိုင်းတာတဲ့ unit တခု ဖြစ်တယ်။ 1 byte မှာ 8 bit ရှိပါတယ်။ကွန်ပျူ တာ ရဲ့memory ကို ပြော တဲ့ အခါ(သို့ မဟုတ်) electronic information (data)တွေကို ပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြု ပါတယ်။ byte ကို အများဆုံး english အက္ခရာ အကြီးစာလုံး B နဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။တခါတရံ မှာတော့ အသေးစာလုံးbကို အသုံးပြုပါတယ်။
Byte ရဲ့ အကြီးဆုံး unit အတွက် name တွေက တော့………
သူ့ ကို တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့memory (သို့ မဟုတ်)hard drives တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ပထမဆုံး 1kilobyte မှာ 1024 bytes ရှိပါတယ်။တချို့ သူတွေကတော့ kilobyte တခုမှာ 1000bytes ရှိတယ်လို့ ပြောပြီးအမှန်တကယ်1024bytes ရှိတာက kibibyte လို့ ပြောပါတယ်။
သူကတော့ information ၏ unit (သို့ မဟုတ်) computer storage တခုဖြစ်ပါတယ်။kibibyte တခုမှာ 1024 bytes ပါ။ 1024 kibibytes ကတော့ mebibyte တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ ကို တော့ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ကွန်ပျူတာရဲ့ memory (သို့ မဟုတ်)hard drives တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြု ပါတယ်။ 1 megabyte မှာ 1 million bytes ရှိပါတယ်။ 1998 ခုနှစ်မတိုင်မှီ International Electrotechnical Commissions(IEC)က ပထမဆုံး mebibyte တခုဟာ 2^20 (သို့ မဟုတ်) 1,048,576 bytes ဟူ ၍ လည်းကောင်း megabytes ကို 1,048,576 bytes (သို့ မဟုတ်) 1,024 kilobytes (သို့ မဟုတ်)1024^2 bytes ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသုံးသူအကြမ်းဖျင်းကတော့ megabyte ကို (IEC)က ထုတ်တဲ့ ဒီ number တွေထဲ ကတခု ကိုသတ်မှတ်အသုံးပြု နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့တိုင်းတာတဲ့ unit တခုဖြစ်ပါတယ်။၄င်းက 1024*1024 bytes ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ mebibyte တခု ဟာ information ရဲ့ unit တခု(သို့ မဟုတ်) ကွန်ပျူတာရဲ့ storage တခုဖြစ်ပါတယ်။ အတို ချူံးကတော့ MiB လို့ခေါ်ပါတယ်။
1MiB=2^20 bytes=1,048,576 bytes=1,024 kibibytes ဖြစ်ပါတယ်။
Mebibyte ဟာ megabyte နဲ့ နီးစပ်ပါတယ်။၄င်းဟာ mebibyte အတွက် ညီမျှ ချက်တခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်(သို့ မဟုတ်) 10^6 bytes=1,000,000 bytes ။ဒီ unit ကိုလည်း(IEC) ကပဲသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။
1 mebibyte =1024(2^10)kilobytes
Gigabyte(GB or gig)
သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 gigbyte = 1 billion bytes ဖြစ်ပါတယ်။Modern computer တခု၏ Random access memory(RAM) မှာ 1,073,741,824(2^30)bytes ကို အသုံးပြုပါတယ်။တချို့ သူတွေကတော့
Gigabyte ကို 1,073,741,824 bytes အစား 1 billion bytes ကို သုံးသင့် တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။
1terabyte =1000 gigabytes(GB)(သို့ မဟုတ်) trillion(1,000,000,000,000)bytes အချို့ သောသူများကတော့ 1 terabyte =1,099,511,627,776 လို့ ပြောကြပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ data တွေကိုသိမ်းဖို့ အတွက် terabytes ရှိတဲ့ hard drives တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
(ဥပမာအားဖြင့် Microsoft organization တွေ server တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ organization တွေမှာသုံးကြပါတယ်….ကျန်တဲ့ကြီးမားတဲ့ organization တွေမှာလည်းသုံးကြပါတယ်)
လုပ်ငန်းသေးသေးလေးတွေမှာတော့ terabyte ကို မသုံးကြပါဘူး။အများဆုံးသုံးတာကတော့ gigabytes,megabytes နှင့် kilobytes တို့ ကိုသုံးကြပါတယ်။နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာ အိမ်တွေမှာပါ terabytes တွေကိုသုံးစွဲလာကြမယ်လို့ ပြောပါတယ်။2008 ခုနှစ်မှာ Apple company က iMac computer ကို 1TB hard drives နဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
1 teribytes =1024 gibibytes (GiB) (သို့ မဟုတ်) 1,099,511,627,776 bytes.1024 teribytes သည် 1exbibyte ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ 1024 teribytes=1exbibyte.
သူ ကတော့ ကွန်ပျူတာများနှင့် electronic devices တွေမှာ တိုင်းတာခြင်း unit တခုဖြစ်ပါတယ်။ 1 Petabytes =1000 terabytes(GB) (သို့ မဟုတ်) 1,000,000,000,000,000(a thousand trillion).ကြီးမားသောအဖွဲ့ အစည်းများတွင် petabytes ကို data storage ရန်အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။
အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။1Pebibytes =1024 tebibytes(TiB)(သို့ မဟုတ်)1,125,899,906,842,624 bytes.
အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။ 1 Exabyte=1000petabytes(PB)(သို့ မဟုတ်)1,000,000,000,000,000,000 bytes ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ ကိုလဲ အနာဂတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ unit တွေကို တိုင်းတာရန်အတွက်အသုံးပြု ပါတယ်။
1 Exbibytes=1024 pebibytes(PiB)(သို့ မဟုတ်)1,152,921,504,606,846,976 bytes.
1024 exbibytes =1zebibyte
1 zettabyte=1000 exabytes(EB)(သို့ မဟုတ်) 1,000,000,000,000,000,000,000(a billion trillion)bytes.
2008ခုနှစ်ထိ zettabyte date တခု ကို သိမ်းဆည်းဖို့ ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာမရှိသေးပါဘူး။
1yottabytes =1000 zettabytes(ZB)(သို့ မဟုတ်)1,000,000,000,000,000,000,000,000(a trillion trillion)ဖြစ်ပါတယ်။
2008ခုနှစ်ထိ yottabyte date တခု ကို သိမ်းဆည်းဖို့ ကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာမရှိသေးပါဘူး။
I translate that from http://en.wikipedia.org/wiki/Byte
Posted by SLIP at 7:48 AM0comments
Labels: Bit and Byte